အသက် ၂၈ နှစ် - ကျွန်ုပ်သည် ဦး နှောက်ကိုအထူးသဖြင့် shemale porn နှင့်ညှိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ရက်ပေါင်း ၉၀ ကျော်သမ္မာသတိ ရှိ၍ ပြန်လာမည်ကိုစိတ်ကူးကြည့်နိုင်သည်။ - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
အသက် (၂၈) နှစ် - ကျွန်ုပ်သည် ဦး နှောက်ကိုအထူးသဖြင့် shemale porn နှင့်ညှိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ရက်ပေါင်း ၉၀ ကျော်သမ္မာသတိ ရှိ၍ ပြန်လာမည်ကိုစိတ်ကူးကြည့်နိုင်သည်။
ဟေးအားလုံး ကျွန်ုပ်၏ဇာတ်လမ်းကိုအခြားသူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကအလားတူအရာတစ်ခုကိုကျော်လွှားနိုင်လျှင်၎င်းအားဖတ်ရှုသူအားမျှော်လင့်ချက်ပေးနိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါ။
ငါသည်ငါ့နှောင်းပိုင်းတွင် 20s အတွက်မိပါတယ်။ အစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက်အဖြစ် porn နှင့်အတူစမ်းသပ် Started ။ ငါ porn ငါ့ကိုပေးခဲ့တယ်သော dopamine လိုအပ်စဉ်းစားကောင်းတစ်ခု 15 နှစ်ပေါင်းများလို့ပြောချင်ပါတယ်။
ငါဟောင်းတစ်ဦးအဆင်မပြေ, အထီးကျန် 12-13 တစ်နှစ်ကြောင့်ဒါဟာအားလုံးစတင်ခဲ့သည်။ ငါဖြစ်စေပျော်စရာအဘို့ဗီဒီယိုဂိမ်းသို့မဟုတ် PMO'd ကစားခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။
ငါထို့နောက်သို့ဘာမသိခဲ့ပါ။ 13-17 မှစ. ငါသည်သင်တို့ကိုဖြစ်နိုင်၏စဉ်းစားနိုင်ညစ်ညမ်းမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှကိုကြင်နာဒေါင်းလုပ်လုပ်။ အရာအားလုံး။ ငါဂရုမစိုက်ခဲ့ပါဘူး။ အနှစ်သက်ဆုံးအမျိုးမျိုးသောဖြောင့်အမျိုးအစားနှင့် shemale ခဲ့ကြသည်။ ဒါပေမယ့်ငါထွက်အဲဒီမှာအမြဲသစ်တစ်ခုမြင့်မားတဲ့ရှာနေခဲ့တာအရှိဆုံးအရာခပ်သိမ်းကြိုးစားခဲ့တူသောခံစားရတယ်။ အဆိုပါ shit အချို့သည်ကျိန်းသေတရားမဝင်ဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်အစဉ်အမြဲငါနေတဲ့အပတ်စဉ်အခြေခံပေါ်မှာကြည့်နောင်တ။ ငါကချွတ် shrug နဲ့ကျွန်မထို့နောက်ရုံဆိခဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောပြရန်ကြိုးစားပါ။ ငါရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ, ငါ့ mom, ရဲ့တုန်ခါတွေ့ရှိခဲ့အပေါ်သူမ၏အတွင်းခံအဝတ်အစားကြိုးစားခဲ့နှင့်ထိုကာလသည် frame အခြားထူးဆန်း, ရှက်စရာ fetishes နှင့်အတူစမ်းသပ်။ ငါသည်ဤငါ့အသက်ကိုများ၏နိမ့်ဆုံးရမှတ်ဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချမှုနှင့်အတူပြောနိုင်ပါတယ်။
အထက်တန်းကျောင်းများ၏အငယ်တန်း-အကြီးတန်းနှစ်ကလူမှုရေးအရငါ့အဘို့အလှညျ့အပွောငျးဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါ ", အေးမြ" ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်မဟုတ်ပေမယ့်ကျွန်မပိုပြီး party မှစတင်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အမိန်းကလေးများအတူတက်နှင့်ချိတ်ဆက်နှင့် Self-ယုံကြည်မှုရရှိခဲ့သည်။ ဒီနေသော်လည်းငါဆဲ feeling PMO ငါ့ကိုပေးခဲ့တယ်လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ တကယ်တော့ငါ PMOing မူးသို့မဟုတ်မြင့်မားသောတစ်ခုခုကို ပို. ပင်ပျော်စရာကသမ္မာသတိရှိကြလော့ဖြစ်ခဲ့သည်ထက်အခါကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ကျွန်မကောလိပ်စတင်ခဲ့သည်။ တူညီတဲ့ shit ။ ငါ PMOd, ငါထွက် သွား. , မိတ်ဆွေများရှိခဲ့ပါတယ်။ ကြှနျတေျာ့အရသာပိုပြီးပုံစံလုပ်ရန်ဖြစ်လာခဲ့သည်သောအခါမူကားကောလိပ်ကျောင်းဖြစ်ပါတယ်။ Shemales ။ သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆက်မပြတ်စိတ်ကူးယဉ်။ ငါဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခြားအရာတစ်ခုခုမှ PMOing ရက်သတ္တပတ်၏စုံတွဲတစ်တွဲကိုသွားချင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ငါကအမြဲတမ်းပြန် shemales မှလာလိမ့်မယ်။ ဒါဟာသူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ခုခုပါပဲ။ သူတို့ဘယ်လိုမိန်းကလေးတွေတူပေမယ့်သူတို့ကဒီလျှို့ဝှက်ချက်ရှိသည်။ ငါကလှုပ်လို့မရဘူး။ ကောလိပ်5နှစ်ပေါင်းကြာမြင့်, နှင့် (နေဆဲသည်အခြားအမျိုးအစားများမှ PMOing စဉ်) ငါအချိန်ဘောင်အတွင်း6လအတွင်းအများဆုံးများအတွက် shemales ထံမှဖြစ်ကောင်းသမ္မာသတိရှိကြလော့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်မစအိုဆွနှင့်အတူစမ်းသပ်ဖို့ကစားစရာအရုပ်ဝယ်လိုက်တယ်။ သူတို့ကိုငါသုံးပြီးပြီးနောက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်နှင့်အတူဒါရွံရှာပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မအများကြီးမဟုတ်အသုံးပြုမှုပြီးနောက်သူတို့ကိုထွက်ပစ်ချ၏။ ငါအချိန်ကာလအတွင်းရှည်လျားသောအကွာအဝေးကြားဆက်ဆံရေးစတင်ခဲ့တယ်။ သူမသည်အဘယ်သူမျှမစိတ်ကူးနှင့်ကျွန်မတကယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာလိင်ခဲ့ထိခိုက်ထင်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါလိင် (shemales) ၏အချို့သောအမျိုးအစားများအတွက်အထူးသညျငါ့ဦးနှောက်ကိုဖမ်းယူနားဆင်မိသောကြောင့်ငါအဆတစ်ခုစိုက်ထူစာရေးထားရန်ရုန်းကန်ခဲ့ရသည်။ သို့သော်သူမအပြစ်မဲ့နှင့်ကြီးနှင့်ရံဖန်ရံခါစိတ်ပျက်စရာအိပ်ရာအတွက်မဆိုလျော့နည်းငါ့ကိုမချစ်ခဲ့ပါဘူး။
ကျွန်မကောလိပ်ဘွဲ့ရခဲ့သည်။ ငါသည်ဤမိန်းကလေးနှင့်အတူပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ တစ်နှစ်နီးပါးအဘို့ငါသည်ငါ၏တစ်ခုလုံးကိုအရွယ်ရောက်ပြီးသူဘဝတစ်လျှောက်လုံးငါ့ကိုသရဲခြောက်တယ်လို့ခဲ့ကွောငျးတူညီတဲ့စိတ်ကူးယဉ်နှင့်အတူရုန်းကန်။ ငါစောင့်အရှောက်သို့မဟုတ်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ cam မိန်းကလေးများအဘို့အပေးဆောင်ခြင်းဖြင့်ထိုအပေါ်ပြုမူဘယ်တော့မှ, ဒါပေမယ့်ငါကထည့်သွင်းစဉ်းစားဒါမှမဟုတ်လုပ်နေတာအကြောင်းကို fantasize မပြုခဲ့ဟုမဆိုနိုင်ပါ။
သူမသည်ငါ့ရှေ့မှာအအိပ်ကိုသွားလိမ့်မယ်။ ငါတက်နေဖို့ငါ့ဖုန်းပေါ်မှာဗွီဒီယိုတစ်ခု watch, ရေချိုးခန်းအတွင်း PMO ထို့နောက်သူမ၏နှင့်အတူအိပ်ရာအတွက်တွားချင်ပါတယ်။ ငါဖြစ်ပျက်ဘာမျှမနဲ့တူထွက်လာကြပြီးတော့, ငါ့ပုံမှန်အတိုင်းစိတ်ကူးယဉ်ဖို့, MO ကိုရေချိုးချင်ပါတယ်။ ကားမောင်းနေစဉ်ကျွန်မလမ်းခရီးစဉ်နှင့် PMO သွားလိမ့်မယ်။ ငါတောင်မှသူမကမြို့ထဲကနေ (နောက်ဆုံးမှာသုံးပြီးနှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ရွံရှာဖြစ်ခြင်းပြီးနောက်တပစ်ချထွက်) တစ်ပါတ်မှုအတွက်သုံးစွဲဖို့အခြားကစားစရာဝယ်လိုက်တယ်။ ဒါကကျွန်မလိုအပ်တူသောငါခံစားခဲ့ရကြောင်းပြင်ဆင်ချက်ရဖို့ကျိုးပဲ့လျက်ဆက်လက်ဘယ်လောက်နိမ့်ပါတယ်။ ငါနေဆဲငါကရတဲ့ရန်အသုံးပြုရာမှငါ့ပြင်ဆင်ချက်ရတဲ့ကြောင့်နောက်ဆုံးတွင်သူ့ကိုငါအများကြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံစိုက်ခဲ့ပါဘူး။
နိုဝင်ဘာလ 2018 ငါ nofap ရှာဖွေတွေ့ရှိ, ငါပျော်ရွှင်ခဲ့ဖူးပါဘူး။ ငါ့ကိုယ်ပိုင်အလားတူကိစ္စများနှင့်အတူရုန်းကန်ကြသူလူများတစ်ဦးကမြေတပြင်လုံးအသိုင်းအဝိုင်း။ ဒါဟာတကယ်ငါ၏အ shemale အလေ့အထကန်နိုင်ဖို့အတွက်ငါ PMO အားလုံးအတူတကွကန်ရန်လိုအပ်ကြောင်းငါ့ကိုယုံကြည်သောပထမနေရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတာနဲ့ငါပြန်ကြည့်မလာကြခြင်းနှင့်အစဉ်အမြဲငါစီစဉ်ကြပါဘူး။ ငါစိုစွတ်သောအိပ်မက်သို့လှန်သော relapses အကြောင်းကိုအိပ်မက်ဆိုးရှိခဲ့တယ်။ အဆိုပါကယ်ဆယ်ရေးငါနှိုးထခြင်းနှင့်ငါတကယ်ပြန်သွားကြသည်, ထိုသို့အားလုံးအိပ်မက်သမ္မာသတိရှိကြလော့နေဖို့ကြီးမားတဲ့စေ့ဆော်မှုဖြစ်ပါတယ်ခဲ့ကြောင်းမပြုခဲ့သဘောပေါက်ပြီးနောက်ခံစားရသည်။ ကြောင်းနေသော်လည်းအကြီးမားဆုံးစေ့ဆော်မှုပဲနှင့်အတူအသက်ရှင်သောငါ၏ရည်းစားကြောင်း, ငါတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဘဝတွေကိုငါစတင်ခဲ့ကတည်းကပိုကောင်းခဲ့ဖူးဘူး။ ဒါဟာနေ့စဉ်ဖြစ်ပျက်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်သူကပျော်ရွှင်နှစ်ဦးစလုံးကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့လုံလောက်တဲ့တွေ့ကြုံတတ်၏။
ယခုတွင်ငါသည် 90 ရက်ပေါင်းကျော်သမ္မာသတိရှိကြလော့ရယ်, ငါကိုပြန်မယ့်စိတ်ကူးနိုင်ပါတယ်။ ဒါက typing error တစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ ငါပြန်မဖို့အသုံးပြုဘယ်အရာကိုသွားမြင်ယောင်ကြည့်နိုင်ပြီး, အဲဒါကိုငါအသက်ရှင်ချင်အသက်တာ၏ကြင်နာမဟုတ်ပါဘူး။ ငါနှင့်အတူအမှုကိုပြုတာပါ။ ဒါကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းရမ္မက်မပါဘဲဖြစ်မထားပါဘူးပြောမယ့်, ဒါပေမယ့်နေ့တိုင်းရမ္မက်အနည်းငယ်ပိုလည်းညှိုးနွမ်း။
ရဲ့ fuck ဆိုတဲ့ဒီလုပ်ကြရအောင်, ယောက်ျားတွေ! porn fuck ဆိုတဲ့ကျနော်တို့ကြောင်း shit မလိုအပ်ပါဘူး! ကျနော်တို့တွန်းလှန်ဘို့ကိုယျ့ကိုယျကိုဂုဏ်ယူဖြစ်ထိုက်!
မကြာသေးမီကပြန်ရောက်သွားတယ်ခဲ့သူမည်သူမဆို: ငါအဲဒီမှာမရေမတွက်နိုင်သောအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တဖန်ထိုအရပ်ဖြစ်ဘယ်တော့မှရန်မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်ကိုအားလုံးအတှကျတစ် relapse ရှိလိမ့်မည်။ ကျနော်တို့ fuck ဆိုတဲ့ဒီလုပျနိုငျ !!!!
LINK - 90 နေ့ရက်များနှင့်မဲရေတွက်